Tartan Qur’aan aqriseed loo qabtay maxaabiista Gaalshiraha Garoowe | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dunida Muslimka February 1, 2016	0 182 Views
Garoowe, Puntland (Himilonews) – Jamciyada Wanaag farista iyo Xumaan reebidda oo ah Jamciyad ka shaqaysa Wacyi galinta Arimaha Bulshada gaar ahaan Ku baraarujinta arimaha Diinta iyo Taageeerida inta tababarta Daran waxay kulama Diini ah oo rajo celin ah u samaysay Maxaabiisat kala duwan ee ku jira Xabsiga wayn ee Magaalada Garoowe.
Jamciyada ayaa u qabatay maxaabiista xabsiga wayn Garoowe tartar Qur’aan akhris ah oo ay Maxaabiistu ku tartamayeen qur’aanka kariimka ah iyadoona abaalmarino kala duwan la siiyay shakhsiyaadkii ka galay Kaalimaha Hore Qur’aan Akhriskaani iyadoona ay siwayn u soo dhaweeyeen mxaabiistii ka qayb gashay tartankaani.
Maxaabiista ayaa inta ay ku jiraan Xabsiga wayn ee Garoowe waxay qaataan casharo Diini ah oo dib loogu toosinayo dhaqankooda ,iyo xirfado kala duwan oo ay dib ugu shaqaynstaan kadib marka ay dhammaystaan xukunadooda kala duwan iyadoona Jacciyada wanaagfarista iyo Xumaareebiddu Dadaal badna ku bixiso sidii maxaabiista dhaqan kooda loo toosin lahaa.
Marka laga yimaado ka warhaynta Maxaabiista kala duwan ee ku jirat xabsiyada Puntland jamciyadu waxay kulamo diini ah oo Bulshada loogu faa’iidaynayo ka samaynaysay bilihii ugu danbeeyay Deegaanada xeebaha ah iyo dhulalka fog fog ee ay ku badanyihiin reer Guuraagu.
Previous: La kulan Ninka ay Gacmihiisa Qoryo noqdeen–Allana u bari!
Next: Tajikistan oo laga mamnuucayo shacaa’irta iyo sunnada Islaamka
Dhaqtar kufsaday gabar 15-jir bukaan ah!